नेता छन,बिकास छैन, किन सधै अपेक्षा? — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » पत्रपत्रीका, राजनीति, समचार, समाचारहरु, समाज → नेता छन,बिकास छैन, किन सधै अपेक्षा?
नेता छन,बिकास छैन, किन सधै अपेक्षा?
November 13, 2017१६६९ पटक
हरेक निर्वाचनमा प्रत्येक उम्मेदवारले मतदाता लोभ्याउन आश्वासनको ‘बिस्कुन’ सुकाउँदै आए । बहुदल आए यता प्यूठानमा काग्रेस, राजमो, माओबादी र एमालेबाट दर्जनजती नेताले चुनाव जिते । तर, यी पार्टीबाट चुनाव जितेका कसैले पनि जिल्लाबासीको बिकास र सम्बृद्धिको ‘भोकको प्यास’ मेटाउन सकेन्न ।
जिल्लाको ईतिहास सधै प्रतीपक्ष झै छ। पञ्चायतमा प्यूठानमा सवै पुगेको छ आशयको बिन्तीपत्र राजा समक्ष चढाएर होस् या बहुदलीय व्यवस्था आउनासाथ राटामाटामा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाइ ढुंगा हानेरहोस् बहुदलिय व्यवस्था आएपछि सम्झौता धोका हो,भनेर होस् । एमाले सत्तामा हुँदा शंकर पोख्रेललाइ हमला गरि हात भांचने घटना भए। जिल्लाबासीले सँधै सत्ताको बिपक्षीलाइ नै भोट दिएर जिताए । अन्तत नागरिकले पाए ‘बिकास विनाको रित्तो प्यूठान’ ।
यस्ता घटनाबाट सत्तापक्ष रुष्ट्र भएकाले बिकास नभएको चर्चा चल्ने गरेको छ।
ऊवेला जिल्लाबाट चुनाव जितेका कोहि नेता पनि मन्त्री बन्न सकेन्न ।पन्चायतमा टंक बहादुर बिष्ट्र सहायक गृहमन्त्री भए बाहेक राज्य तहमा पहुंच थिएन। केन्द्रमा पहुँच पुग्न नसकेकाले प्यूठान बिकास निर्माणमा पछि परेको महशुस जिल्लावासीमा भयो । धेरै नेता जन्मिए पनि नीति निर्माणको तहमा कोहि पुगेन्न भन्ने गुनासोका बिच नेकपा(एमाले) केन्द्रिय उपाध्यक्ष बामदेव गौतम प्यूठान आए ।पहिलो पटक बर्दियाबाट पराजय व्यहोरेका गौतम दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा जिल्ला फर्किएका हुन् । केन्द्रिय राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने नेता जिल्ला फर्किएपछि धेरै मतदाताको साथ पाएर उनले चुनाव जित्न सफल भए ।
गौतमले चुनावताका समग्र विकास निर्माण सम्वन्धी ३४ बुँदे प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरे । नौमुरे, उपल्लो झिमरुक जलबिद्युत आयोजना, भालुवाङ–बाग्दुला–भिमगिठे सडक, चाल्नेटार बिमानस्थल, स्वर्गद्धारीमा केबलकार, पूर्वदेखि पश्चिम सम्म औद्योगि करिडोर, एक घर एक रोजगारी, भिंगृ, देविस्थान, बांगेशाल, पकला, दाखाक्वाडी, बाग्दुला र मच्छिमा शितभण्डार निर्माण, व्यवस्थित कृषि बजार निर्माण, स्वर्गद्धारीमा वेदवेदांगी पाठशाला, संस्कृत महाविद्यालय, आयूर्वेद सहितको मेडिकल कलेज निर्माण, व्यवस्थित यातायात निर्माण, जिल्लाभित्रै स्नातकस्तरको आवशिय प्राविधिक विद्यालय स्थापना, प्राविधिक शिक्षा उत्र्तिण गर्ने व्यक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था लगाएतका प्रतिवद्धता गौतमका थिए । गौतमले सार्वजनिक गरेका ३४ मध्ये ३२ वटा बुँदा अझै अधुरै छन् ।
उनका प्रतिवद्धताले आम मतदातालाई हौसायो । गौतमकै अगुवाईमा जिल्लाले काँचुली फेर्ने आश सवैले गरे । प्यूठान क्षेत्र नम्वर १ बाट निर्वाचित भएर उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत भए । तर, उनले सांसद् र मन्त्रीकालमा आफ्ना बचनबद्धता पूरा गर्न सकेन्न । उनको कार्यकाल नसकिदै यसपालीको निर्वाचनका लागि उम्मेद्धवार छान्ने प्रक्रिया शुरु भयो । यसपाली पनि प्यूठानबाटै बामदेव नै चुनाव लडने र अघिल्लो पटकका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेमा अपेक्षा मतदाताले गरेका थिए । एमाले प्यूठान जिल्ला कमिटीले प्रतिनिधीसभा सदस्यका लागि उनको सिफारिस समेत ग¥यो । गौतम आफै पनि प्यूठान आउने आश्वासन दिए । तर बामगठबन्धनका क्रममा जिल्लाबाट राष्ट्रिय जनमोर्चालाई मैदान खाली गरेर आफु बर्दिया हानिए । पटक पटक जिल्ला आउँदा उनले मातृभूमिको स्नेहले प्यूठानी माटोमा आफनो जीवन आहुती दिने बचन छाडेका थिए । ‘म सधैँका लागि प्यूठान फर्के, अव कतै जाँदिन ।’ उनले जिल्लाका धेरैजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । यद्यपी, उनले फेरी फेरी बर्दिया नै रोजेर जिल्लावासीले उनीप्रति गरेको आशामा ‘तुषारापात’ गराइदिए ।
प्रतिवद्धता पूरा नगरी नेता गौतम बर्दिया फर्केपछि यो घटनाक्रमले जिल्लावासीलाई दुःखी बनाएको छ ।जिल्लाका नागरीक भन्छन्,‘राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने ऊनै बामदेव थिए । तर केहि काम नगरी बर्दिया फर्केपछि हामी निराश छौँ । अव चुनाव जित्नेसँग के आश गर्नु र ?’
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछी राज्यको उच्च तहमा प्युठानको राम्रै पहुंच रह्यो।यो बेला यहाबाट ६ जना सांसद भए।प्युठान रस्पुरकोटका गोबिन्दराज पोख्रेल राष्ट्रीय योजना आयोगका उपाअद्यक्ष भए भने प्युठानी बुहारी रेखा शर्मा सामान्य प्रशासन मन्त्री भइन,शान्तराज सुवेदी अर्थ सचिब भए। यो बेला पनि बिकासको गति झन सुस्ताउदै गयो।जिल्लाका ठुला योजना विभिन्न बहानामा ओझेलमा परे।सांसदिय निकाय र मन्त्रीमण्डलमा मात्र नभइ मुख्य दलको केन्द्रीय तहमा समेत प्युठानवाट उल्लेखनिय प्रतिनिधित्त्व पायो।देशभक्त गणतान्त्रीक मोर्चाका अध्यक्ष मोहोन वैद्य(किरण),नेकपा मसालका महामन्त्री मोहोनबिक्रम सिहं,एमालेका उपाअध्यक्ष बामदेव गौतम,केन्द्रीय सदस्य सुर्य थापा,माओबादि केन्द्रका लिलामणि पोख्रेल,कृष्णध्वज खड्का,मणि थापा नयांशक्तिका नवराज सुवेदी,कृष्णध्वज केसि लगायतका नेताको बलियो उपस्थिती छ।सत्ता र पार्टिको उपल्लो निकायका नेताहरुले जिल्लाको बिकासमा उपयोग गर्न सकेन्न। नेपाल बार एसोसिएसन नेपाल प्युठानका अद्यक्ष डा शिवराज पण्डितले राजनितिक हिसाबले प्युठान केन्द्रभागमा रहेपनी सत्ताको राजनितिमा पहुच पुग्न नसक्दा प्युठान बिकासमा पछि परेको बताए।”बिकासमा नेताकै भुमिका प्रधान हुन्छ।”उनले भने”सत्तामा नेताको पहुंच पुगेन।”
दलहरु संकुचित सोचबाट माथी उठ्न नसकेको र जिल्लाको बिकासलाइ भन्दा बढि पार्टिलाइ केन्द्रमा राखेर काम गरेकाले जिल्ला पछाडी परेको जिल्लाबासी टिप्पणी गर्छन।
बामदेवले प्यूठान छाडेपछि संयूक्त बामगठबन्धनबाट राजमोका केन्द्रिय उपाअध्यक्ष दुर्गा पौडेल र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फवाट भूकम्प पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) प्रा.डा.गोबिन्दराज पोख्रेल प्रतिनिधीसभा सदस्यको लागि पहिलोपटक चुनावी मैदानमा छन् ।यी दुवै उम्मेदवार पनि गौतम जस्तै पाँहुना बन्ने आशंका मतदाताहरुमा छ । पौडेल लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहेपनि जिल्लाको राजनीतिमा उनी कुनै भूमिकामा थिइनन् । कांग्रेसका पोख्रेल सरकारी लाभको पद छाडेर चुनावमा होमीएका छन् ।
अघिल्ला निर्वाचन जितेका नेताहरुको आश्वासनबाट अघाएका जिल्लाका मतदाताहरुको चाहना भने एउटै छ, ‘जसले जितेपनि गफ होइन् काम गरेर देखाउन’ । नेताले बोले अनुसार काम नहुने देखे भोगेका सर्वसाधारण अचेल भन्न थालेका छन,‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका । गफ सुनाएर भोट माग्न आउने चलन कहिले नसकिने भो ।’